Laba geesood oo isku mid ah? Baadhitaan lagu sameynayo waddo garasho iyo jid-bulsheed cilmi-nafsi oo horseed u ah awood-siinta iyo xag-jirnimada - Equal Access International
Laba geesood oo isku mid ah? Baadhitaan xagga garashada iyo wadiiqooyinka nafsaani-bulsho ah ee horseedda xoojinta iyo xag-jirnimada
Warbixintani waxay sahamineysaa hannaan cusub oo dib loogu soo nooleeyo xagjirnimada qalalaasaha iyo waxyaabaha la midka ah ee u dhexeeya xoojinta iyo xag-jirnimada.
Nigeria, Sahel, Dhisidda Nabadda & Isbedelka Xag-jirnimada, Kaqeybqaadashada Warbaahinta & Teknolojiyada, Cilmi baaris & Barasho
Ma jiraa xiriir ka dhexeeya awood-siinta & xagjirnimada? Bulshadu waxay ula dhaqantaa mid hadaf ah in la taageero, halka kan kalena laga fogaado oo laga baqo - waayo? Warbixintani waxay baareysaa aragtiyaha muhiimka ah ee awood-siinta iyo xagjirnimada si loo fahmo waxyaabaha ay wadaagaan isla markaana loo aqoonsado fursadaha abuurista ka-hortagga rabshadaha ee ku wajahan ka-qaybgalka bulshada ee aan rabshadaha lahayn.
Sida ay u badan yihiin tallaalo badan oo ay kujiraan qiyaaso yar oo ah fayras nool, xagjirsiintu waxay kujirtaa qiyaaso yar, ama waxyaabo ay wadaagaan, awoodsiin. Taasi looma jeedo in natiijooyinka la rabay ay isku mid yihiin, laakiin waa qaab isku mid ah.
Sinnaanta wadajirka u dhexeeya xoojinta iyo xag-jirnimada waa ka dhowdahay midba fikirkaa. Warbixintan hal-abuurka leh oo faahfaahsan ayaa baaraysa fursadda lagu celinayo awood si markaa loogu wargaliyo faham qoto dheer oo ka dhiga waxa xag-jirku yahay mid isku-darka, si dhakhso leh, iyo dariiqa ugu habboon ee abuuridda isbadal shaqsiyeed iyo mid bulsho.
Warbixintan, qorayaashu waxay u kala soocayaan heerarka loo qaatay ee "awood-siinta" sidii guul la doonayo oo la taageeray, halka "xag-jirnimada" ay tahay in laga hortago oo laga baqo. Baadhitaanka sida u kala duwanaanshaha labada eray u caado u noqday ajendayaasha wadahadalka, siyaasadda, iyo aragtida, warbixintani waxay soo bandhigaysaa waxyaabaha ay ka kooban yihiin labadan aragtiyood ee muhiimka ahi.
Ugudambeyn, ujeedada sahamintaan ayaa ah sidii loo mideyn lahaa loona badalilahaa geedi socodka burburka iyo dabeecadaha inta badan la xariira xagjirnimada ee natiijooyinka togan ee bulshada ku saleysan. Halkii la iskugu halleyn lahaa kahortagga xagjirnimada rabshadda (CVE) ayaa ujeeddooyinkiisa looga hortagayaa xagjirnimada ama la xoojiyaa ka-hortagga xag-jirnimada, kuwaas oo leh xaddidyo aan caadi ahayn oo badanaa diidi kara hantida ay leeyihiin dhallinyarada xag-jirnimada ah, warbixintan waxay sahamineysaa mudnaanta nidaamka la mid ah "dib-u-soo-celinta xagjirnimada" . ”(Sieckelink 2016; Nema 2016)
Marka loo eego dib-u-eegidgan, barnaamijyada ka-hortagga xag-jirnimada waxaa inta badan lagu saleeyaa waafaqsanaanta, asal ahaan culeyska saarista dib-u-habeynta iyo dhaqan-celinta shakhsiga "xag-jirka ah". Qorayaashu waxay ku doodayaan in tani aysan kaliya ka fogeynin waxyaabaha aasaasiga u ah shakhsiga uu doortay aqoonsigiisa, nidaamkiisa aaminsanaanta, iyo dariiqa, habkaan sidoo kale wuxuu ku guuldareysanayaa inuu dalbado in bulshada, hay'adaha, ama dowlad-goboleedyadu ay garwaaqsadaan tabarucaadkooda ama ay riixaan isbeddel.
Waraaqdani waxay ku doodeysaa si ay u noqoto mid wax ku ool ah, barnaamijyada barnaamijka 'CVE' waxay u baahan tahay inay aqoonsato, kobciso, oo xayeysiiso hantida suurtagalka ah ee dhalinyarada xagjirka ah - sida wakaaladda, ballan-qaadista, hoggaaminta, iyo karti-u-yeelashadooda - waxayna baartaa suurtagalnimada dib-u-eegis ku saabsan hamigooda, dhaqankooda, iyo dabeecadaha ka yimaada xag-jirnimada rabshadaha wata ee xoojinta awoodda bulshada ee aan rabshadda ahayn.
Halkan ka soo dejiso warbixinta